အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – Oct 2012 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – Oct 2012
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – Oct 2012
Posted by kai on Oct 2, 2012 in Myanmar Gazette, News, Opinion - Op-ed | 46 comments
”တိုင်းပြည်ကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဘာလိုလဲဆိုရင် တပ်မတော်ဟာ Standard Army ဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့တပ်မတော်ဟာ Standard Army မဖြစ်သေးဘူး။ မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် တပ်မတော်ကိုလည်း စပြီးတော့ ပြုပြင်ပြောင်း လဲနေတဲ့ အနေအထားတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ အမေရိကန်နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးတော့ Training တွေပေးဖို့တို့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်ဖို့တို့ ဘာတို့ ဒါတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ အစီအစဉ်မရှိပါဘူး။ နောင်လည်း ကျွန်တော်တို့ရှိစရာတော့လည်း သိပ်အကြောင်းမရှိပါဘူး”ဟု နိုင်ငံတော်သမ္မတက ပြောကြားခဲ့သည်။
ယနေ့တပ်မတော်သည် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးအတွက်သာဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရန်အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ရန် မရှိကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအပိုင်းမှာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို အကာအကွယ်ပေးသည့် သဘောသာရှိကြောင်း၊ တပ်မတော်၏ အဓိကအလုပ်မှာ တိုင်းပြည်ကိုကာ ကွယ်ရန်သာဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
”ကျွန်တော်တို့ တပ်မတော်ကို Standard Army ဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့ အမေရိကန်တင် မဟုတ်ပါဘူး။ တရုတ်ကရော၊ ရုရှားကရော၊ ဂျပန်ကရော ကျွန်တော်တို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းပညာတွေ၊ အတတ်ပညာတွေ ဒါတွေ ကတော့ ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု သမ္မတက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
အရာရှိသင်တန်းသားများအား ယခင်က အနောက်နိုင်ငံများက နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော် လက်ခံခဲ့ခြင်း မရှိ ခဲ့ကြောင်း၊ ရုရှားသို့သာ စေလွှတ်ခဲ့ရ ခြင်းများ များပြားခဲ့ကြောင်း၊ ယခုအခါတွင် တပ်မတော်အရည်အသွေးမြှင့်ရန် အမေရိကန်၊ အင်္ဂလန်၊ ရုရှား၊ တရုတ်၊ ဂျပန် စသည့် မည်သည့်နိုင်ငံကိုမဆို စေလွှတ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် တပ်မတော်နှစ်ရပ် ပူးပေါင်းပြီး စစ်ရေးပြခြင်းမျိုးကိုမူ ပြုလုပ်သွားမည်မဟုတ်ကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့သည်။
September 30, 2012, 10:03 pm1 Comment
နှစ်နိုင်ငံ(သို့) နိုင်ငံပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းလေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့်
“အမေရိကန်နိုင်ငံ”ဟူသော အသုံးအနှုံးကို ကန့်ကွက်ပါကြောင်း…။
မနက်ဖြန် အယ်လ်အေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မြန်မာ-အမေရိကန်တွေကို မိန့်ခွန်းပြောပါမယ်..။
တဆက်တည်း.. အောက်တိုဘာ၂ရက်နေ့ကို အောင်ဆန်းစုကြည်နေ့အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ကြားသိရပါကြောင်းပါနော..
ကမ္ဘာ့မြို့ကြီးတွေမှာ..Twin towns / Sister cities တွေဆိုတာ ဖွဲ့နိုင်ကြတယ်လေ..
လော့စ်အိန်ဂျလိစ်မြို့ကို.. ရန်ကုန်(ဒါမှမဟုတ်) မန္တလေးရဲ့ ညီမတော်မြို့အဖြစ် တင်ရင်ကောင်းမလားလို့..
သမီးဒေါ်ဂလေးကို ညီမယေးတော်ချင်တယ်…။ သဂျီး သဘောတူတူ မတူတူ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ။ ပါပါဦးခိုင် ခေါ်ရမား ဒယ်ဒီဦးခိုင် ခေါ်ရမား ပေါဘာ…။
BURMA RELATED NEWS OCTOBER 01, 2012.
AFP – Myanmar leader would ‘accept’ Suu Kyi as president
Reuters – Bangladesh blames Muslim Rohingyas for temple attacks
AP – Bangladesh says opposition attacked Buddhists
The Nation – Myanmar’s media shake-up Asean
The Nation – Health officials contact Myanmar about Aids patients
Asia News Network – Attack on Buddhist temples premeditated: Bangladesh govt
Asia News Network – UN urges Myanmar to address roots of communal conflict
Asia News Network – Thailand should follow Myanmar and compromise
FOX Business – PTT Plans to Set up Retail Oil Venture in Myanmar –Report
The Star Online – Felda set to penetrate Asean via Myanmar
The Star Online – Felda to build Myanmar supply chain
Telegraph(India) – Blockade hits border trade
Lakehouse Daily News – NCCSL in successful business visit to Myanmar
Khaleej Times – Editorial: Myanmar’s progressive insight
ValueWalk – Myanmar To Become The Next Low Cost Labor Producer?
International Business Times – Myanmar Revisited? Cambodian Pro-Democracy Activist Jailed For 20 years
GlobalPost (blog) – Myanmar’s president: reforms not owed to Arab Spring
The Irrawaddy – President Suu Kyi? Amend Constitution First, Say MPs
The Irrawaddy – 88 Gen Leader Puts Cronies on Notice over Mining Project
The Irrawaddy – UN Sec-Gen Backs Thein Sein
Mizzima News – Thein Sein meets with Islamic group at UN
Mizzima News – Suu Kyi leaves San Francisco, heading for LA
Mizzima News – North Korea decries US call for Burma to sever ties
DVB News – Aung Kyi: ‘There arealot of difficulties’
ကျုပ်တို့ တပ်မတော်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကတော့
အကြမ်းပတမ်းခံနိုင်တဲ့နေရာ မှာ ဘယ်နိုင်ငံက စစ်တပ်နဲ့ ယှဉ်ယှဉ် ၊ ပထမတန်းစားပဲ
By Editorial Board, Published: September 22
BURMA RELATED NEWS OCTOBER 02, 2012.
AP – Myanmar gets its first investment bank
AP – Bangladesh vows to protect Buddhists after attacks
Reuters – SPECIAL REPORT:How Japan Inc stoleamarch in Myanmar
ANI – West should challenge Myanmar Govt. to uphold basic freedoms: Human Rights Watch
Aljazeera News – Myanmar Shan refugees struggle at Thai border
UPI – Myanmar’s reform record at risk
CNN – Aung San Suu Kyi and the power of unity
Radio Netherlands – Myanmar’s Suu Kyi hails democracy, as ends US trip
Radio Australia – Burma’s Suu Kyi pays tribute to models of democracy
THE ASAHI SHIMBUN – World Bank, ADB to consider loans to Myanmar in Tokyo conference
The Nation – Transformation, Still Incomplete, Sweeps Burma
Bangkok Post – Police set to hit Supat with murder charges
The Diplomat – New Opportunities for the Women of Burma
eTurboNews – Bangkok Airways sets its sights on Rangoon
Asia Times Online – Myanmar stillahigh-risk investment
Bernama – Myanmar To Set Up More Local Industrial Zones
DNA India – Coast guard chiefs from 17 nations meet on Oct 3
The Irrawaddy – Rights Groups Say Migrants Blocked from Leaving Mae Sot
The Irrawaddy – Myitsone Villagers Plan to Sue CPI
The Irrawaddy – Lifting Sanctions Futile Without Infrastructure: Exporters
Mizzima News – Suu Kyi’s indepth interview: New York Times
Mizzima News – Myanmar’s Rohingya problem
Mizzima News – Muslims engage in violent rampage in Bangladesh
DVB News – Education deal targets migrant students
DVB News – Rule of law and reality in Burma
ဖတ်ပြီးပြီသူကြီး။ သူကြီး ဘယ်လိုထင်တယ်ဆိုတာလေးလဲ ပြန်မျှပါအုန်း ဟီး
သမိုင်းပညာရှင်ဆိုတဲ့ဂုဏ်/ကျော်ကြားနေမှုကို.. စာရေးဆရာက.. ခပ်တည်တည်နဲ့.. တန်းဝင်ညှိတာလို့ပဲပြောရမှာပါပဲ..
… စဖတ်တာနဲ့.. သမိုင်းပညာရှင်စာကို” ထောက်”ရာမှာ.. ဘုန်းတော်ကြီးစာ/စကားကိုးကားထောက်ပြပြောပြနေပြန်တော့ကာ… ..
.. နှစ်၁၀၀၀ ကျိန်စာရယ်လို့..
— ဘုရင်အလောင်းမင်းတရားမှ ဘုရင်ဂျော့-၂ ထံပေးပို့သော ရာဇသံရွှေပေ – အပိုင်း(၄) မှ..
အိပ်မက်မကောင်းတာကတော့အမှန် ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ထမင်းလုံးတစ္ဆေခြောက်ခြင်းလည်းမဟုတ်၊ အိပ်မက်ဆိုးများ နှစ်ကြိမ် သုံးကြိမ်ခန့် မက်နေမိသည်။ မည်သူတွေမှန်းမသိသောသူများ၏ ဝိုင်းဝန်းချုပ်ကိုင်မှုကြောင့် ရုန်းထွက်၍မရသော ကျွန်တော်၊ ရှိသမျှအားအင်တို့ဖြင့် ရုန်း ထွက်လိုက်သောအခါ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတို့ဖြင့် အိပ်မက်ဆိုးမှနိုးထလာမိတဲ့ ကျွန်တော်၊ ချစ်စရာခွေးငယ်လေးအား ညင်သာစွာ ပွတ်သပ် မိစဉ် ကျွန်တော်၏လက်အား သူ၏အစွယ်ဖွေးဖွေးတို့ဖြင့် ငုံခဲခြင်းကိုခံရကာ ဆွဲခါလှုပ်ရမ်း၍ ခွေးငယ်လေး၏အစွယ်ဖွေးဖွေးတို့မှ လွတ် မြောက်သွားသောအခါ အစွယ်၏ကိုက်ခဲမှုဒဏ်ရာကြောင့် နာကျင်စွာ အိပ်မက်ဆိုးမှလန့်နိုးမိခြင်းတို့ကို ယခု ပြည်ပနိုင်ငံတွင် ၂ ကြိမ်၊ ၃ ကြိမ်ခန့် အိပ်မက်ဆိုးများမက်ခြင်းကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။
အိပ်မက်နှင့်ပတ်သက်၍ အချို့သောသူများသည် အိပ်မက်ဆိုးမက်ပါက အတိတ်နိမိတ်မကောင်းခြင်း၊ ထို့ကြောင့် ကုသိုလ်ကောင်းမှုများ ပြု လုပ်ရန်လိုခြင်းတို့ကို ပြောကြားကြသော်လည်း အချို့သောသူ များသည် အိပ်မက်ကို ပြောင်းပြန်ကောက်ယူရကြောင်းတို့ကိုလည်း ပြော ကြပြန်သည်။ ဤသည်တို့မှာ အယူစွဲများပင်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်မှတ်သည်။ ကျွန်တော်သည် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) တွင် စတင်လုပ်အားပေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့စဉ်ကတည်းက ယခုအချိန် ထိ ကောင်းမှုကုသိုလ်တို့ကို လက်တွေ့ နေ့စဉ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ခြင်း၊ တရားဘာဝနာ ကိုလည်းပွားများကာ သတိတရား၊ အသိတရားတို့ဖြင့် မိမိကိုယ်မိမိ အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းကျောင်းနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အိပ်မက်နှင့် ပတ်သတ်၍ မည်သို့ပင် တိုက်ရိုက်မှန်ကန်သည်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်၍ ပြောင်းပြန်ယူရသည်ဖြစ်စေ၊ ရင်ဆိုင်ရန် အသင့်အနေ အထား ရှိခဲ့သည်။ အိပ်မက်ဆိုးတိုင်း လက်တွေ့တွင်ဆိုးမည်လား… အိပ်မက်ကောင်းတိုင်း လက်တွေ့တွင်ရော ကောင်းမည်လား …။ ကောင်းပြီ…။
ကျွန်တော်ယခု အိပ်မက်ဆိုးများမက်နေသည်။ သို့သော်ပြင်ပတွင်ကား ယခု အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီရှိ US. Capitol အတွင်းသို့ရောက် သောအခါ လွှတ်တော်အမတ်များ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးများ၊ မြန်မာပြည်သူလူထုများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ NGO များ၊ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တကွ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးကို တဖက်တလမ်းမှ စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြသော မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ နယ်စပ်ဒေသတွင် တိုင်းရင်းသားပြည်သူဒုက္ခသည်များအား ကူညီဖေးမ ကာ ကျန်းမာရေးအားစောင့်ရှောက်ပေးနေသော ဒေါက်တာဒေါ်စင်သီယာမောင်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်လျှက် မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေးအတွက် စွမ်းစွမ်းတမံ ကြိုးစားအားထုတ် ကူညီပေးခဲ့သော ကိုအောင်ဒင်၊ မြန်မာပြည်တွင်း ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် အင်တိုက် အားတိုက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့သော ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင် (ပွဲတက်ရောက်ခြင်းမရှိခဲ့) တို့နှင့်အတူ NED (National Endowment for Democracy) မှ ပေးအပ်သောဆုအား တက်ရောက်ရယူခဲ့ရသည်။
ထို့အပြင် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်အား အမေရိကန်နိုင်ငံမှ ချီးမြှင့်သော Congressional Gold Medal ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားသို့လည်း Hillary Clinton အပါအဝင် အမေရိကန်နိုင်ငံရှိ အစိုးရအရာရှိကြီးများနှင့်တကွ မြန်မာပြည်သူလူထု တို့နှင့်အတူ မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦး အောင်မင်း၊ သမ္မတအကြံပေးတို့နှင့်အတူ ထိုပွဲအား ကျွန်တော်ပါတက်ရောက်ခွင့် ရရှိခဲ့သေးသည်။ ထိုခရီးစဉ်တစ်လျှောက်တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံအား စစ်မှန် သော ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက် ပံ့ပိုးကူညီကြသော အမေရိကန်နိုင်ငံအစိုးရ အရာရှိများ၊ လွှတ်တော် အရာရှိများ၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ NGO အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပါ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဖြစ်သူ ဦးအောင်မင်းသည် ယခင် အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ချီးမြှင့်ဂုဏ်ပြုသည့်ပွဲအား တက်ရာက်ခြင်းသည် မင်္ဂလာရှိသော လုပ်ရပ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်ခန့်က အမေရိကန်နိုင်ငံသို့ရောက်ရှိ လာသော မြန်မာနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်း စိန်သည် လည်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရင်းနှီးစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများကို နယူးယောက်မြို့တွင် ပြု လုပ်ခဲ့ပြန်သည်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သတ်၍ အသံလွှင့်ငှာန တစ်ခုဖြစ်သော VOA မှ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းအား မေးမြန်းထားရာတွင် ဝန်ကြီးဦးစိုးသိန်းမှ “နယူးရောက်မှာ အတူတူရောက်နေကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ဘက် ကလည်း နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၊ ဟို ဘက်ကလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္က​ဌ – မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် အမကြီးနှင့်တူတူရှိတော့ အမကြီးက လာပြီးတော့ နှုတ်ဆက်တာပေါ့ဗျာ၊ တွေ့တယ်၊ စကားလေးဘာလေး ပြောတယ်။ ရန်ကုန်မှာလိုပဲ၊ နေပြည်တော်မှာလိုပဲ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် ရင်းနှီးကြတယ်လေ။ တွေ့ဆုံကြတယ်၊ ဒီသဘောပါ။ အရင်တုန်းက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့ မရရာက အခုတော့ အတူတကွ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အဖြစ် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့သည်။ ပြည်သူတွေ တိုးတက်ဖို့ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး အကုန်ပေါ့ဗျာ၊ ဒီအတွက် နှစ်ယောက်ရဲ့အားက နည်းတဲ့အားလားဗျာ” ဟူ၍ ပွင့်လင်းစွာဖြင့်ပြောကြားခဲ့သည်ကိုလည်း မင်္ဂလာရှိစွာ ကြား သိခဲ့ရပြန်သည်။
၂၆.၉.၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင်လည်း ရန်ကုန်ရှိ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) သို့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နေအိမ်မှ အသင်းသို့ အလှူငွေလာ ရောက်လှူဒါန်းလိုကြောင်း အကြောင်းကြားခဲ့ကာ ပကာသန ဟိတ်ဟန်မရှိဘဲ ရိုးသားပွင့်လင်းစွာဖြင့် အလှူငွေ (၁ဝ) သ်ိန်း လာရောက်လှူ ဒါန်းခဲ့သည်။ ယင်းအလှူ လှူဒါန်းခြင်းအား သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသားစုတို့မှ လှူဒါန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကိုယ်စား လာရောက်လှူဒါန်းသူ ဦးနွယ်ဦးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အသင်း၏ လုပ်ငန်းရပ်များအား အသင်း၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လုပ်အားပေးများတို့မှ လိုက်လံ ရှင်းလင်းပြသခဲ့ပြီးနောက် အလှူရှင် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းကိုပြုလုပ်ပြီး သာမန်မော်တော်ယာဉ်လေးဖြင့် ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြောင်းကိုလည်း သိရှိခဲ့ ရသည်။
ထို့ကြောင့် အိပ်မက်ဆိုးလျှင် လက်တွေ့တွင်ဆိုးသည်လား…၊၊ အိပ်မက်ကောင်းလျှင် လက်တွေ့တွင်ကောင်းသည်လား…။ အိပ်မက်ကိုပြောင်းပြန်ယူရသည်လား…။ အိပ်မက်ကိုတည့် (ဒဲ့) ယူရသည်လား… ဆိုသည့် အကြောင်းအချက်များသည် လားလားမျှ မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း ကျွန်တော်သိရှိခဲ့ရသည်။ အယူသီးမှုတစ်ခုကို ကျွန်တော်သည် လက်တွေ့တွင် ရိုက်ချိုးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခင် အချိန်ကာလများတွင် လူထု ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ရန်သူသဖွယ်သဘောထားခဲ့သူများ၊ ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ၏ လုပ် ဆောင်ပေးဆပ်နေမှုများအား သံသယစိတ်ဖြင့် အမြဲစောင့်ကြည့် သတိပေးတားမြစ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရမှုများ၊ ထို့နောက် ကျွန်တော် ကျော်သူအား အနုပညာလုပ်ငန်းများကို ပိတ်ဆို့တားမြစ်မှုများကို လုပ်ခဲ့သည့် အပြင် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း နိုင်ငံရေး အရိပ်အာဝါသ လွှမ်းခြုံထား သည်ဟု စွပ်စွဲခေါ်ယူမေးမြန်းခဲ့မှုများ စသည့်အထင်အမြင်လွဲမှားခဲ့မှုများကို ခဝါချကာ ယခုကဲ့သို့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်မှုတွင် တစ်ဦးကို တစ်ဦး လက်တွဲဖေးမကူညီ အသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့နှင့်အတူ အများပြည်သူတို့အား ကူညီဖေးမပေးနေသော နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန် ကုန်) ၏ ကုသိုလ်ရေးလုပ်ငန်းများအား အသိအမှတ်ပြုကာ လာရောက်လှူဒါန်းခဲ့သော သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဇနီးဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း မိသား စု၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများနှင့် ဝန်ကြီးများ၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ ၏ ယခုလုပ်ဆောင်ချက်များအား မင်္ဂလာတရားနှင့်အညီ မြန်မာပြည်သား ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် ဦးသန့်၏ ဗုဒ္ဓတပည့် ဥပါသကာတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟူသော ခံယူချက်ဖြင့် မှတ်တမ်းကဗျည်းတင် လိုက်ရပါတော့သည်။
ကျွန်တော်သည် အရာရာကို သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်သည့် စိတ်ဓာတ်အမြင်ကို ခံယူကျင့်သုံးသည်။
သည်း ခံခွင့်လွှတ်ခြင်း စိတ်ဓာတ်
အထူးသဖြင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့မှု၊ လူသားခြင်းစာနာထောက်ထားမှု၊
မေတ္တာ ဘာဝနာ ပွားများမှုတို့ဖြင့် ကြီးပြင်းလာခဲ့သူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။
(ဦးသန့် – ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်)
On the anniversary of his passing we look back at the legacy of one of Apple’s founding fathers.
5 October 2011 – the world of technology mourned the loss of the mind behind landmark gadgets such as the Macintosh, iPhone and iPad. Steve Jobs lostalong and fraught battle with pancreatic cancer on5October 2011 – he was aged just 56.
During the year that followed, Apple dug deep and mustered the strength to march onwards, mappinganew path and releasing the iPhone5to great (and commercial) acclaim, as well asa‘new’ iPad (the third) and iOS 6. Jobs’ legacy lives on, for example his guiding hand is said to have influenced some of the decisions behind Apple’s latest iPhone, as well as four years’ worth of ideas (including plans for an Apple television).
Join Tech & Gadgets as we look back at some of the visionary’s greatest achievements and defining moments both inside and outside of Apple.
အောင်ပန်းမြို့ ၌ မိုးပြာဝါဒ ဆန့်ကျင်ရေး ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြ
ရှမ်းပြည်နယ် အောင်ပန်းမြို့၊မြို့မ ပြင်သာကျောင်းတိုက် အတွင်း၌ ယနေ့(၄.၁၀.၂၀၁၂)သောကြာနေ့ တွင် မိုးပြာဝါဒဆန့်ကျင်သူ(၃၀၀)ခန့် ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ပွဲကို (၅.၁၀.၂၀၁၂)နေ့တွင် ပြုလုပ်ရန် သက်ဆိုင်ရာသို့ တင်ပြသော်လည်း ခွင့်မပြုခဲ့ ကြောင်းသိရပါသည်။—
Sent: Sunday, October 7, 2012 3:52 PM
Subject: အောင်ပန်းမြို့ ဆရာတော်ဦးဥတ္တမကိစ္စ
ဥပဒေ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်သူလူထုကို လှည့်စားထားသော အောင်ပန်းမြို့က ဆန္ဒပြပွဲ
ကလောမြို့နယ်တရားရုံးမှ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သော ဦးဥတ္တမ၏အမှုဖြစ်စဉ်ကို အမှီပြု၍ အောင်ပန်းမြို့နေ ပြည်သူအချို့က (4-10-2012)ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲတစ်ခု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ယင်းဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲမှာ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပြည်သူလူထုကို လှည့်စား၍ ပြုလုပ်ခဲ့သော ဆန္ဒပြပွဲတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်ရန် အောက်ပါအတိုင်း ဖြေရှင်းတင်ပြပါသည်။
‘ ဥပဒေပြဌာန်းချက်ကို လှည့်စားခြင်း’ ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူ၏အကျိုးကိုထိခိုက်နိုင်သော ကိစ္စများကို ဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန် ဥပဒေကခွင့်မပြုပါ။ ယခုကိစ္စတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချင်းချင်းလှည့်စားထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းကိုလှည့်စားခြင်းဆိုသည်မှာ ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့်ပြုမိန့်မရရှိပါဘဲ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ အစည်းမှ ခွင့်ပြုခဲ့သယောင်ပြုပြီး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့လှည့်စားခံရသည့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းက မည်သို့အရေးယူမည်နည်း။ စောင့်ကြည့်နေပါသည်။
ပြည်သူလူထုကို လှည့်စားခြင်းဆိုသည်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းမှ ခွင့်ပြုခဲ့သဖြင့် မြို့လယ်ပြည်သူလူထု အကြားသို့ထွက်၍ ဆန္ဒပြခဲ့သယောင်ပြုလုပ်ပြီး အင်တာနက်တင်၍ လှည့်စားခဲ့ပါသည်။
အမှန်မှာ ခွင့်ပြုမိန့်မရသဖြင့် ဖမ်းဆီးခံရမှာကြောက်၍ အပြင်သို့မထွက်ရဲဘဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွင်း၌ပင် ဆိုင်းဘုတ်ကိုင်၍ ဓာတ်ပုံများရိုက်ပြီး အင်တာနက်တင်၍ ပြည်သူကို တိရိစ္ဆာန်ဆေးကုဆရာဝန်ဦးထွန်းမြင့် နှင့်အဖွဲ့မှ လှည့်စားခဲ့ခြင်းသားဖြစ်ပါသည်။
(အထက်ပါအောင်ပန်းမြို့မှ ဆရာတော် ဦးဥတ္တမကိစ္စကို အင်တာနက်စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။)
မြန်မာ(သို့) အင်ဂျင်သုံးလုံးဆွဲလာတဲ့ရထား (မူရင်းဆိုဒ်..http://cammlek.blogspot.com/2012/10/blog-post_5.html)
By- Bridget Welsh
ဘာသာပြန်ဆိုသူ – ဇင်ဝေသော်
သူတို့နိုင်ငံ အမှန်တကယ် ပြောင်းလဲလာနေပြီဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြုရန် မြန်မာခေါင်းဆောင်များ အရင်တစ်ပတ်က ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တက်လာရင်း ပြသခဲ့ကြသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ သမိုင်းဝင်အမေရိကခရီးကို သွားနေကြချိန် ပါလီမန်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ သူရဦးရွှေမန်းက စင်ကာပူနှင့် သြစတေးလျတို့သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။သူတို့ချန်ထားခဲ့သော မက်ဆေ့ခ်ျကတစ်သွေးတစ်ရောင်တည်း ဖြစ်၏။ မြန်မာပြောင်းလဲလာနေပြီ။ ပြောင်းလဲမှုကအစစ်အမှန်ဖြစ်ပြီး နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ဖို့ အကြောင်းမရှိ။ မြန်မာတို့ ပြောင်းလဲမှု ပုံသဏ္ဍာန်သည် မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် ပြောင်းလဲမည်ဟု ဖြစ်လေသည်။
သူတို့ကိုယ်တိုင် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်သို့တက်လာရင်း မြန်မာ၏ ပုံရိပ်ကိုလည်း ထိုးပြသွားခဲ့သည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မည်သူက ပို၍အရေးကြီးသည်ဆိုသည့်သဘော မသက်ရောက်ရအောင် ဂရုတစိုက်ပြောခဲ့ကြသည်။ သူတို့သုံးယောက်စလုံး တညီတညွတ်တည်း ပြောသွားခဲ့သောစကားများမှာ “ မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းလဲရေးအတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများက အကူအညီပေးကြရန်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ပြုလုပ်ပြီး လူထုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တည်းပေးကြရန်နှင့် အထူးသဖြင့် ပိတ်ဆို့ထားသော စီးပွါးရေးတံခါးများ ဖွင့်ပေးရန်၊ နည်းပညာအကူအညီများ ပေးကြရန်တို့ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်သုံးယောက်စလုံး ကမ္ဘာထဲသို့ တပြိုင်နက် ဝင်ရောက်လာခြင်းသည် မကြုံစဖူးအထူးတလည်ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေ၏ ထိန်းချုပ်မှုရှိသည်ဟူသော သံသယများကြားမှ ဤအမျိုးသားနှစ်ယောက်နှင့် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို စနစ်တကျပြုလုပ်လာတာကို တွေ့ရှိရသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်သည် လွယ်ကူလှသောကိစ္စမဟုတ်၊ သူတို့အချင်းချင်းမှာပင် အလျော့ပေးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ရသည်။ ကာလလည်း အတန်ကြာအောင် ညှိနှိုင်းယူခဲ့ကြရသည်။
နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို သက်သေပြလိုက်သောအချက်က ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေး ဆင်ဆာဥပဒေကို ရုတ်သိမ်းခြင်းနှင့် ဧပြီလရွေးကောက်ပွဲအပြီးဆက်လက်လွှတ်ပေးလာနေသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိစ္စတို့ဖြစ်သည်။စီးပွါးရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို ဖောင်းပွနေသော ငွေကြေးစနစ်ကို ကိုင်တွယ်ရန် ဧပြီလက စတင်စီမံကိန်းချ ကြိုးစားလာခဲ့ခြင်းက သက်သေခံလျှက်ရှိသည်။
အခြားကိစ္စများက မပြီးဆုံးသေးသော မျှော်လင့်ခြင်းပန်းချီကားများ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပင် ဖြစ်၏။ ယင်းဥပဒေကို ပါလီမန်က အတည်ပြုခဲ့၏။ သို့သော် ထိုဥပဒေကို ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ရှိနေသေးသည်။ အထူးသဖြင့် အများအငြင်းပွါးဖွယ်ဖြစ်နေပြီး နိုင်ငံတော်၏ ပင်မစီးပွါးရေးအခန်းကဏ္ဍလည်းဖြစ်သော စိုက်ပျိုးရေးနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်တို့ဖြစ်သည်။ သူတို့သုံးယောက်စလုံး တညီတညွတ်တည်း ထွက်ဆိုခဲ့သောအသံသည် ပြောင်းလဲမှုလမ်းစဉ်ပေါ်သို့ သူတို့ရောက်နေပြီဟူသော အချက်ဖြစ်သည်။
သူတို့ သုံးဦးအနက် မည်သူက အနာဂတ်မြန်မာကို ဦးဆောင်မည်နည်းဆိုသောအချက်သည် ကမ္ဘာနှင့်မဆိုင်၊ သူတို့အိမ်တွင်းရေး ရှင်းရမည့်အခက်အခဲသာဖြစ်သည်။ အမှန်တကယ်ဆိုရမူ သူတို့သုံးယောက်စလုံးသည် နိုင်ငံတော်၏ သမ္မတရာထူးကို ရည်စူးထားကြသူများဖြစ်ကြသည်။ဦးသိန်းစိန်ကမူ သမ္မတသက်တမ်းတစ်ခုပြီးလျှင် ရာထူးမှနှုတ်ထွက်လိမ့်မည်ဟု ယူဆရသည်။ မည်သူ့ကို သူ့နေရာအတွက် လျာထားမည်နည်းဆိုသောကိစ္စက မည်သူမျှမသိပေ။ သူရဦးရွှေမန်း သမ္မတရာထူးကို မှန်းနေသည်ဆိုသောအချက်ကတော့ သိသာထင်ရှားသည်။
သူမ၏သားနှစ်ယောက် ဗြိတိသျှလူမျိုးများဖြစ်နေသဖြင့် သူမအတွက် အဟန့်အတားသဖွယ်ဖြစ်နေသော်လည်း ဒေါ်စုကြည် သမ္မတဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုတော့ လူအများက မျှော်လင့်ထားနေကြသည်။ ဤပြဿနာများ ဟန်ချက်ညီညွတ်ဖို့တော့ လိုပေလိမ့်မည်။ သို့သော် လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာသည့်အချိန်ရောက်မှသာ ဤပြဿနာက တက်လာစရာရှိပေသည်။ ထို့အတူ ဒေါ်စုကြည်၏ အဖွဲ့ချုပ်လွှတ်တော်အမတ်များနှင့် အခြားလွှတ်တော်အမတ်များအကြား နိုင်ငံတော်ကို မြန်မာဟုခေါ်ရေး၊ ဘားမားဟုခေါ်ရေး ရှိနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ မဲဆန္ဒနယ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်း သူတို့ကြား၌ မပြေမလည်ဖြစ်နေသောကိစ္စတစ်ချို့ ရှိခဲ့ကြသည်။ ဤအချက်ကို နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံ အစီရင်ခံခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတော် တရားရုံးချုပ်က အတည်ပြုခဲ့သောဥပဒေက ပါလီမန်အဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်အချို့ကို ကန့်သတ်ထားလျှက်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့် ပါလီမန်အနေနှင့် သမ္မတနှင့် သမ္မတရုံးအပေါ် ပြောရေးဆိုခွင့်တို့ဖြစ်သည်။ထိုပြဿနာကို ရှင်းရမည့်အစား တရားသူကြီးက ဤဥပဒေကို တဖန်လက်မှတ်ထိုး အတည်ပြုပေးခဲ့ပြန်သည်။ ထို့ကြောင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် သူရဦးရွှေမန်းတို့အကြား အာဏာခွဲဝေမှု မညီမမျှ မည်မျှဖြစ်ခဲ့လေသနည်းဟူသောအချက်က မရှင်းမလင်း ရှိနေဆဲသာ ဖြစ်သည်။
ဤကိစ္စနှင့်အလားတူ မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီနှင့်ပတ်သက်သော ပြဿနာလည်း ယမန်နှစ်က ရှိခဲ့ဖူးသည်။ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက သူတို့အမှန်တကယ်လိုအပ်သော ငွေကြေးပံ့ပိုးမှု အလုံအလောက်မရရှိခဲ့ဟု ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။ ထိုစဉ်ကလည်း ပါလီမန်၏ထောက်ခံမှုဖြင့် သူရဦးရွှေမန်းက သမ္မတရုံးနှင့် ဆန့်ကျင်ပြီး သူ့အယူအဆအပေါ် သူရပ်တည်ခဲ့ဖူးသည်။
ဒေါ်စု၏ အဖွဲ့ချုပ်ပါလီမန်အမတ်များနှင့် ယခင်စစ်တပ်မှ ပါလီမန်အမတ်များအကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများက ယခုအသံတိတ်ဆိတ်နေ၏။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ် အစိုးရစစ်စစ်ဖြစ်ရေးနှင့် စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများက စီးပွါးရေး၌ အကြီးအကျယ် ပါဝင်ပတ်သက်နေမှုတို့ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စများကလည်း တဖန်ပြောစမှတ် ဖြစ်လာနိုင်သည်။
သူရဦးရွှေမန်းက လစ်ဘရယ်စီးပွါးရေးစနစ်ကို အားသန်ပုံရသည်။ သို့သော် သူ့အပေါ်မှာလည်း နိုင်ငံတွင်း စီးပွါးရေးသမားတို့၏ ဖိအားတစ်ချို့ရှိနေပြန်သည်။ ဒေါ်စုကြည်ကိုယ်တိုင်ကလည်း ဒီမိုကရေစီအတွက် သူမတောင်းဆိုခဲ့သည်နှင့်အညီ ပြုမူရန် ဖိအားတစ်ချို့ ရှိနေနိုင်ပြန်သည်။ ထို့အပြင် ခေါင်းဆောင်သုံးဦး၏ မတူညီသော ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့် လိုက်(ဖ်) စတိုင်က နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်နေနိုင်ပြန်သည်။
ဦးသိန်းစိန်က စကားနည်းသည်။ စီမံကိန်းပြတ်ပြတ်သားသား မရှိလှဟု ဆိုရန်ရှိသော်လည်း ချမှတ်ထားသောမူကိုတော့ တသွေမတိမ်း လိုက်တတ်သည့်သဘော တွေ့ရသည်။ ဒေါ်စုကြည်က လူထုသိ၊ ကမ္ဘာသိဖြစ်ပြီး မြန်မာလူထုနှင့် ကမ္ဘာကလည်း သူမထံမှ အများအပြား မျှော်လင့်ထားကြသည်။ ပါလီမန်အမတ်တွေထဲမှာပင် သူမက အခြားအမတ်တွေထက် ခေါင်းတစ်လုံးပိုမြင့်နေသည်။ ယခုဆိုလျှင် ဒေါ်စုကြည်သည် ဥပဒေကို ဝေဖန်သူထက် ကိုယ်တိုင်ဥပဒေရေးဆွဲသူအဖြစ် ပါဝင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဤအကူးအပြောင်းကား ခက်ခဲသော အကူးအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်၏။
သူရဦးရွှေမန်းက နိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်သူဖြစ်၏။ ဆယ်စုနှစ်များစွာ စစ်တပ်ကို နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားခဲ့သူဖြစ်၏။ သို့သော် ယခုအခါ၌ သူကိုယ်တိုင် လူထုမေတ္တာကို ရရှိရေး၊ လူထုထောက်ခံရေးအတွက် ကြိုးစားအားထုတ်လျှက်ရှိသည်။ စစ်တပ်ထဲ၌ အဓိကပါဝင်ခဲ့မှုများကြောင့် ပါလီမန်အမတ်တို့၏ ထောက်ခံမှုရရှိရေးကလည်း သူ့အတွက် ကြီးကျယ်သောစိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖြစ်နေခဲ့သည်။
သူတို့အချင်းချင်း၌ မတူညီသော စရိုက်များရှိနေခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတော် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၌ကား တူညီသောအမြင်နှင့် ဦးတည်ချက်များ ရှိနေကြသည်။ အပြန်အလှန် နားလည်မှု၊ အပြန်အလှန် လေးစားမှုတို့ကိုလည်း တွေ့မြင်လာရသည်။ သူတို့ချင်း ကွဲပြားခြားနားမှု မည်မျှပင်ရှိစေ နိုင်ငံတော် ပြုပြင်ရေးကို အဟန့်အတားဖြစ်စေနိုင်လောက်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာများ သူတို့ထံတွင် မတွေ့ရပေ။ သူတို့၏ ညီညွတ်သော တွဲလက်များကို အရင်တစ်ပတ်အတွင်း ကမ္ဘာကို ပြသနိုင်ခဲ့ကြသည်။
သူရဦးရွှေမန်းက စင်ကာပူနှင့် သြစတေးလျရောက်စဉ် စီးပွါးရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နည်းပညာအကူအညီရရှိရေးကို ထပ်လောင်းပြောခဲ့သည်။ စီးပွါးရေးသမားများအတွက် တံခါးများ ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်စသဖြင့် ပြောကြားသွားခဲ့သည်။
အမေရိကဖက်ကို ကြည့်ပြန်တော့လည်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များကို ပိတ်ပင်ခဲ့သော ပြည်ဝင်ခွင့်၊ မြန်မာပြည်ထုတ်ပစ္စည်းများအား အမေရိကသို့ တင်သွင်းခွင့် ပိတ်ဆို့ခြင်းများ ရုတ်သိမ်းခဲ့သည်။ ဤအချက်တို့သည် အမေရိကန်တို့၏ အလုပ်ကို အလုပ်နှင့် သက်သေပြ (Action for action) ပေါ်လစီပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပြောင်းလဲလာသော မြန်မာနိုင်ငံသည် သမ္မတ အိုဗားမား၏ ပေါ်လစီမှန်ကန်သည်ဟု သက်သေပြရာလည်းရောက်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီကူးပြောင်းရေးအတွက် စစ်တပ်ကိုရော အဖွဲ့ချုပ်ကိုပါ မတူညီသော ပေါ်လစီတို့ဖြင့် သူတို့ချဉ်းကပ်ခဲ့ကြသည်။ ဆုပေး၊ ဒဏ်ပေးစနစ်မှန်သည်ဟု ယူဆရန်ရှိသည်။
ပြောင်းလဲလာနေသော မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာပေါ်ထင်ဟပ်သော ပုံရိပ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဤခေါင်းဆောင်သုံးဦးစလုံးကို ချီးကျူးရပေလိမ့်မည်။ သူတို့သုံးဦး လက်တွဲညီညီ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကြောင့် ပို၍တောက်ပသော အနာဂတ်ကို မြန်မာတို့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။သူတို့သုံးဦးရှေ့ခရီးကိုဘယ်လိုဆက်ကြမလဲဆိုသောအဖြေသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်ကံကြမ္မာဖြစ်နေသည်။ လတ်တလော အနေအထားကို သုံးသပ်ရာမှာတော့ သူတို့သုံးဦး၏ စီးမြောနေသောရစ်သမ်သည် ဟန်ချက်ညီနေသည်ဟု ဆိုရပေတော့မည်။
***(The writer is an Associate Professor in Political Science at Singapore Management University)
New ADBI materials/opportunities
* Asia-LAC High Level Economic Policy Forum – Asia-Latin America: New Engines of Growth of the Global Economy? http://www.adbi.org/email.notification/url.php?id=10009&url=%2Fevent%2F5240.asia.lac.high.level.economic.policy.forum
* Seminar by Alejandro Jara – Latin America and Asia – More Cooperation and Trade http://www.adbi.org/email.notification/url.php?id=10009&url=%2Fevent%2F5244.latin.america.asia.trade.cooperation
* The Eurozone Crisis and Its Implications for Asian Economies http://www.adbi.org/email.notification/url.php?id=10009&url=%2Fevent%2F5247.eurozone.crisis.implications.asian.economies
* The PRC’s Thirst for Commodities and Impact on Latin America http://www.adbi.org/email.notification/url.php?id=10009&url=%2Fevent%2F5245.prc.commodities.impact.latin.america
* How Should We Bank With Foreigners?-An Empirical Assessment of Lending Behavior of International Banks to Six East Asian Economies http://www.adbi.org/email.notification/url.php?id=10009&url=%2Fworking-paper%2F2012%2F10%2F05%2F5246.lending.intl.banks.six.east.asian.economies
* Sovereign Risk: A Macro-Financial Perspective http://www.adbi.org/email.notification/url.php?id=10009&url=%2Fworking-paper%2F2012%2F10%2F02%2F5241.sovereign.risk.macrofinancial.perspective
* The Emerging \_”Post-Doha\_” Agenda and the New Regionalism in the Asia-Pacific http://www.adbi.org/email.notification/url.php?id=10009&url=%2Fworking-paper%2F2012%2F10%2F02%2F5242.post.doha.new.regionalism.asia.pacific
* The World Bank and the Asian Development Bank: Should Asia Have Both? http://www.adbi.org/email.notification/url.php?id=10009&url=%2Fworking-paper%2F2012%2F10%2F02%2F5243.world.bank.adb.should.asia.have.both
ADBI’s daily publication, e-newsline, provides news and analysis on development-related topics from around our region. Subscribe now. http://www.adbi.org/e-newsline/subscribe.html
See what’s new on ADBI: http://www.adbi.org/recent.additions/
Subscribe to our Blog: http://feedburner.google.com/fb/a/mailverify?uri=AsiaPathways&loc=en_US
Follow Us on Twitter: http://twitter.com/ADBInstitute/
Visit our Facebook Page: http://www.facebook.com/pages/Asian-Development-Bank-Institute/122064391180645
Subscribe to ADBI RSS feeds: http://www.adbi.org/rss/
Read ADBI documents in Scribd: http://www.scribd.com/ADBInstitute
ADBI YouTube Channel: http://www.youtube.com/ADBInstitute
By Patrick Boehler | September 12, 2012
Both soda brands were already available on the streets of Rangoon, but atacost: the drinks had to be smuggled in from neighboring countries, pushing prices up to 1,000 kyat per bottle — slightly more than $1 but the equivalent ofaday’s wage for many Burmese. The legal sale will also bring new tax revenue to government coffers: Burma’s government loses $27 million per year in revenue on smuggled beer alone, according to recent report by the Chinese magazine Caijing.
Now, only two countries are left in the anti-soft drink Axis of Evil: Cuba and North Korea are the only two countries in the world where Coke and Pepsi are not available.
Read more: http://newsfeed.time.com/2012/09/12/coca-cola-goes-back-to-burma-for-first-time-in-60-years/#ixzz28ePtxHdS
အောက်ကသတင်းအရ.. မြန်မာပြည်ဆိုင်ဘာကရော.. အမျိုးသားအဆင့်လုံခြုံရေးဘယ်လောက်ရှိသလဲမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်နေပါကြောင်း..
WASHINGTON October 8, 2012, 03:20 am ET
အမေရိကားမှာတော့.. ဘာသာရေးဆိုတာရဲ့.. ကျဆုံးခန်း စလာပြီဖြစ်ပါကြောင်း…
ဒါမျိုးသတင်းများဆို သူကြီးတို့ သိပ်ကြိုက်ပေါ့
ရဲဘော်သုံးကျိပ် ၀င် ဗိုလ်မှူးချုပ်ဟောင်း ကျော်ဇော ကွယ်လွန်
ဤခေါင်းစဉ်အောက်၌ မိမိကိုယ်တိုင် ကြုံတွေ့နေရသော ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ဆိုင်သော စင်္ကာပူ၏ အားသာချက်တို့ကို ဆွေးနွေးရန် အကြံဖြစ်မိသည်။ အစိုးရပေါ်လစီနှင့်မဆိုင်၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်သာ ဆိုင်၏။ ဤ၌ ကဏ္ဍအချို့ ခြုံငုံမိသမျှ ခြုံငုံမိအောင်တော့ ကြိုးစားမည်။ စင်္ကာပူဟူသည် အကြောင်းမဲ့ ရှေ့ရောက်နေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်၊ အကောင်းတကာ့အကောင်းများ ရရှိစေရန် အမှန်ပင် တံခါးဖွင့်ထားသော လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ် National University of Singapore Buddhist Society (www.nusbs.org.sg) အကြောင်းကို ဆွေးနွေးပြပါမည်။ လူငယ်လေးများပင် ဖြစ်လင့်ကစား သူတို့က အပိတ်များ မဟုတ်ကြ။ စင်္ကာပူ၌ မဟာယာန ပိုအားကောင်းသည်ဟုဆိုစေ၊ ထေရဝါဒနှင့် အခြားယဉ်ကျေးမှုတို့ကို မျက်ကွယ်မပြုကြ။ သူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်ကိုပင် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့ချုပ်အနေဖြင့်သာ လက်ခံသည်။ ထေရဝါဒ၊ မဟာယာန၊ ဇင်၊ တိဗက်တန်စသည့် သီးသန့်နာမည်များ၊ ယဉ်ကျေးမှုများကို လက်မခံ။ မဟာယာနမှ ကောင်းတာကို ယူသည်။ ထေရဝါဒ၊ ဇင်၊ တိဗက်တန်တို့ထံမှ ကောင်းတာကို ယူသည်။
ထို့ကြောင့် သူတို့အဖွဲ့အစည်းအတွက် ဩဝါဒါစရိယများ တင်မြှောက်ရာ၌ပင် ဤယဉ်ကျေးမှု လေးခုစလုံးမှ ဆရာတော်များပါအောင် အနည်းဆုံး လေးပါး တင်မြှောက်ကြသည်။ ဩဝါဒ ခံယူကြသည်။ သူတို့ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကိုက်ညီသော၊ လက်တွေ့ကျသော ဩဝါဒတို့ကို ကျင့်သုံးကြသည်။ သို့ဖြင့် မဟာယာန၊ ထေရဝါဒ ဘာသာရေးဓလေ့ထုံးစံများနှင့် ကျောင်းသားများက အကျွမ်းတဝင် ရှိနေလေတော့သည်။
သူတို့မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာသာ ရှိသည်။ ယဉ်ကျေးမှု အမည်နာမ မရှိ။ ကောင်းသည်ဟု ထင်သည်။ တိဗက်တန်ဗုဒ္ဓဘာသာကလည်း အကြောင်းမဲ့ ပေါ်ပြူလာ ဖြစ်နေသည် မဟုတ်။ ဇင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုလည်း အကြောင်းမဲ့ အမေရိကန်တွေ ကျင့်သုံးနေကြသည် မဟုတ်။ ကောင်းကွက်များ ရှိကိုရှိပါသည်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲ ကောင်းပြီး သူများဟာကို လေ့လာရမှန်း မသိသော ယဉ်ကျေးမှုသည် အပိတ်ဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ် ပိတ်နေသည်။ အိုင်ဒီယာတို့ ပိတ်နေသည်။
ဒုတိယ ဆွေးနွေးလိုသော အဖွဲ့အစည်းက မိမိ နေထိုင်သီတင်းသုံးရာ ကျောင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤကျောင်းသည် ၂၀၁၀- ခုနှစ်က နှစ် (၅၀) ပြည့်ခဲ့ပြီး သက်တမ်းနုနု စင်္ကာပူ၌ ဒုတိယ ရှေးအကျဆုံး ထေရဝါဒ ကျောင်းတစ်ကျောင်း ဖြစ်သည်။ တည်ထောင်ခဲ့သော ဆရာတော်က သီရိလင်္ကာဆရာတော်။ ထိုဆရာတော်ကြီး ပျံလွန်တော်မူပြီး သီရိလင်္ကာဆရာတော်နှစ်ပါး ဆက်လက် ကျောင်းထိုင်သည်။ သီဟနာဒကား ၂၀၀၃ – ခုမှ ဤကျောင်းကို ရောက်သည်။
ကျောင်းဒကာ၊ ဒကာမတို့ကလည်း အဖွင့်များ ဖြစ်သည်။ အပိတ် မဟုတ်ကြ။ သီရိလင်္ကာရဟန်း၊ မြန်မာ ရဟန်းဟု မစွဲ။ အတူတူပင် ဖြစ်သည်။ သူတို့နှင့် အံဝင်ခွင်ကျရှိသော သီရိလင်္ကာယဉ်ကျေးမှုကို ကျင့်သုံးသည်။ မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ကျင့်သုံးသည်။ သီရိလင်္ကာဆရာတော်ကြီး၏ တပည့်များပင် ဖြစ်သော်လည်း လက်တွေ့ကျသော မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကို ကျင့်သုံးရန် လက်မနှေးကြ။ ထို့ကြောင့် သီရိလင်္ကာနှင့် မြန်မာယဉ်ကျေးမှုတို့မှ အားသာချက်တိုင်းကို ရယူကြသည်။ ကောင်းသည်ဟု ထင်၏။ ဘုရားအဆုံးအမက တစ်ခုတည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုကသာ ကွဲနေ၏။
ထို့ထက် ထင်ရှားသော တံခါးဖွင့်ဝါဒမှာ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီး တင်မြှောက်ရေးပင် ဖြစ်၏။ ဤကျောင်းကား သီရိလင်္ကာယဉ်ကျေးမှု အမြစ်ခိုင်နေသော ကျောင်းဖြစ်ပြီး ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးတိုင်းလည်း သီရိလင်္ကာရဟန်းတော် ဖြစ်နေရမည် ဖြစ်သည်။ ဤဥပဒေကို “စလုံး” ဗုဒ္ဓဘာသာတို့က ဂရုမစိုက်။ အလုပ်ဖြစ်သော ရဟန်းကို ကျောင်းထိုင်တင်မည်။ သီရိလင်္ကာသော၊ မြန်မာသော၊ ထိုင်းသော၊ ဘာသောညာသော မရှိကြ။ သို့ဖြစ်ပင် မြန်မာရဟန်း ကျောင်းထိုင် ဖြစ်လာခဲ့၏။ မြန်မာလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ သီရိလင်္ကာ လူ့အဖွဲ့အစည်းတို့၌ ဤမျှရဲတင်းသော ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်။
စလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမြင်က ရှင်းသည်။ ရဟန်းဟူသည် ဘုရားသားတော် ဖြစ်သည်။ ဤမျှ ဖြစ်သည်။ လူမျိုးမကြည့်၊ သင်္ကန်းရောင် မကြည့်၊ အသားအရေအရောင်ကို မကြည့်။ ပွင့်၏။ မပိတ်။
ဤ၌ ညံ့နေရစ်သည်က မြန်မာနှင့် သီရိလင်္ကာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်ကြ၏။ ထေရဝါဒချင်း တူသည်ဟု ဆိုစေ၊ မြန်မာအခမ်းအနား၌ သီရိလင်္ကာတွေက ယောင်တောင်တောင်၊ သီရိလင်္ကာ အခမ်းအနား၌ မြန်မာတွေက တောင်ကြည့်မြောက်ကြည့်။ စလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာတွေက နှစ်ခုစလုံးနှင့် အံဝင်အောင် လုပ်ပြသွားနိုင်သည်။ အားသာချက် မဟုတ်ပါလော။ သူတို့၏ အဓိက အားသာချက်သည် အစွဲနည်းခြင်း ဖြစ်သည်။
အချို့မြန်မာတို့က မေးတတ်ကြသည်။ ဤတရုတ်တွေ ထေရဝါဒစစ်သလားဟု ဖြစ်၏။ ကြည့်ပါလေ၊ ကျောင်းထဲ၌ ကွမ်ယင်မရှိ၊ ဘာမရှိ၊ ဘုရားဆင်းတုသာ ရှိ၏။ တစ်နေ့သုံးကြိမ် ဘုရားရှိခိုး၏။ ဒကာ၊ ဒကာမ အများစုက မင်္ဂလသုတ်၊ ရတနသုတ်၊ မေတ္တသုတ် သုံးသုတ် အလွတ်ရ၏။ တရားထိုင်၏။ သင် ပရိတ်သုံးသုတ် အလွတ်ရပါ၏လောဟု မေးရန်သာ ရှိ၏။
သူတို့ကိုယ်သူတို့ ထေရဝါဒစစ်လှပြီ ထင်သော ထိုထိုမြန်မာတို့က ညနေပိုင်း သစ်သီးကပ်ကြ၏။ ကျောင်းမှ တရုတ်ဒကာ၊ ဒကာမတို့က ဆွမ်းသစ်သီးစသည်တို့သည် (၁၂) နာရီကျော်က မကပ်သင့်ကြောင်း ရှင်းပြတတ်၏။ ထိုအခါ ရွှေမြန်မာတို့က တရုတ်တို့ သူတို့နေရာမို့ ဘာမကပ်ရ၊ ညာမကပ်ရ လူစွာလုပ်သည်ဟု ထင်ကြသည်။ အမှန်မူ ထိုထိုရွှေမြန်မာတို့ “ချာ” ခြင်းသာ ဖြစ်၏။ ပန်းကပ်သော် မည်သူမှ သူတို့ကို မတား။
ကျွန်ုပ်ဆိုလိုချင်သော အချက်သည် ဘာသာရေးမှာလည်း စလုံးတွေ “မချာ” ဟူသော အချက် ဖြစ်သည်။
ထို့နောက် ဆွေးနွေးလိုသော အချက်က သူတို့ ပညာရေးဖြစ်သည်။ ပညာရေးကောင်းသည်။ ပညာရေးသာမက အကျဉ်းအကြပ်ထဲရောက်သော် ဘာလုပ်ရမည်၊ ဘာလုပ်သင့်သည်ဆိုတာမျိုးတွေကိုပင် ကြုံလျှင်ကြုံသလို ငယ်စဉ်ကတည်းက ပညာပေးတတ်ကြ၏။
ဤမှ စလုံး ဒကာ၊ ဒကာမများနှင့် မြန်မာပြည် သွားကြစဉ် ကျိုက်ထီးရိုးမှအပြန် ကားနှစ်စီးအနက် တစ်စီးက ပျက်နေ၏။ အနည်းငယ် စိုးရိမ်မိသည်။ စလုံးများက ကားဒရိုင်ဘာနှင့် ဧည့်လမ်းညွှန်ကို ဆူလား၊ ကြိမ်းလား လုပ်နေလေမည်လားဟူသော အတွေးကြောင့် ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ရှေ့ကားကို ခဏ အနားယူခိုင်းပြီး အခြားကားတစ်စီးကို တားပြီး ထိုကားပျက်ရှိရာ ပြန်လိုက်သွားမိသည်။ ရောက်သောအခါ အံ့ဩဖွယ် တွေ့ခဲ့ရသည်။ သူတို့အားလုံး စိတ်မဆိုး၊ စိတ်မညစ်ကြ။ ကားသမား စက်ပြင်နေချိန် အချိန်ဖြုန်းသည့်သဘောဖြင့် ပရိတ်ရွတ် ပြိုင်နေကြသည်။ တစ်ယောက်တလှည့်စီ ရွတ်ပြီး အမှတ်ပေးနေကြသည်။ မိမိရောက်သွားသောအခါ အခုမှ အမှတ်ပေးဒိုင်ပါ ရောက်လာသည်၊ ဘုရားမသည်ဟု လက်ခုပ်လက်ဝါး တီးကြ၏။ ထပ်ပြိုင်ကြ၏။ ထိုကားပေါ်၌ လူပေါင်း သုံးဆယ်ကျော်ခန့် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လူ (၃၀) မပြည့်မီ စက်လည်း ပြန်ကောင်းသွားတော့၏။ စိတ်ညစ်ချိန်မရ၊ စိတ်ဆိုးချိန်မရ၊ ဆူချိန်ငေါက်ချိန် မရလိုက်ကြတော့။ ဤသို့ နည်းလမ်းရှာဖွေတတ်ခြင်းသည် သူတို့ပညာရေး၏ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်၏။
သီဟနာဒကိုယ်တိုင် မြန်မာတွေနှင့် ခရီးသွားခဲ့ဖူးသည်။ ကားပျက်ပြီဆိုလျှင် ဘာလုပ်လို့ လုပ်ရမည် မသိ။ စက်ပျက်သဖြင့် စိတ်ညစ်နေရှာသော ကားသမားကို ဝိုင်းဆူကြသည်သာ များ၏။ မည်သူ့အတွက်မှ ကောင်းကျိုးမရှိ။
အစပထမပိုင်းက ဤကျောင်း၌ မြန်မာနှင့် ပတ်သက်သော သင်တန်းများ၊ တရားပွဲများ၊ ပဋ္ဌာန်းပွဲများ မရှိ။ သူတို့ စလုံးတို့ အခမ်းအနားများသာ ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် သူတို့ကို ဩဝါဒပေးရသည်။ ဤကျောင်းသည် သံဃိကကျောင်းသာ ဖြစ်သည်။ အစိုးရဥပဒေအရ “စလုံး” တို့ ပိုင်သည်။ ဘုရားဥပဒေအရ သံဃာပိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ပတ်သက်သော ဘယ်သင်တန်းမဆို ကျောင်းအားပါက၊ စာသင်ခန်းများ အားပါက လက်ခံသင့်သည်။ သို့မှသာ အစိုးရဥပဒေကိုလည်း မဖောက်၊ ဘုရားဥပဒေကိုလည်း မဖောက်ရာ ရောက်မည်ဟု ဖြစ်သည်။
မှန်၍ လက်တွေ့ကျသော ဩဝါဒမှန်း သူတို့သိသည်။ အားတက်သရော အားပေးကြသည်။ ဓမ္မကို သင်တာမှန်လျှင် တရုတ်လိုပဲ သင်သင်၊ အင်္ဂလိပ်လိုပဲ သင်သင်၊ မြန်မာလိုပဲ သင်သင်၊ သာသနာပြုခြင်းပင် ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်သွားကြတော့သည်။
ထိုမှနောက် တရုတ်မင်ဒရင်းလို ဓမ္မသင်တန်းများ၊ မြန်မာလို ဓမ္မသင်တန်းများ၊ တတ်စွမ်းသရွေ့ လက်ခံလာခဲ့ကြသည်မှာ သာဓုခေါ်စရာပင် ဖြစ်သည်။ စင်္ကာပူ၌ ဤကျောင်းမျိုး ဒေါ်လာဘီလီယံရှိလည်း ဝယ်၍ မရ၊ အစိုးရက မြေအကျယ်ကြီး မရောင်းတော့။
မနှစ်ကပင် အစိုးရဆိုင်ရာမှ လူကြီးတစ်ယောက်က မေးသည်။ ဒီကျောင်းက အရှင်ဘုရား ပိုင်တာလားတဲ့။ စင်္ကာပူ၏ ဥပဒေကို မသိသော အရာရှိဟုပင် မှတ်ရပေတော့မည်။ မည်သည့် နိုင်ငံခြားသား ရဟန်းမှ မည်သို့သော မြေစိုက်အဆောက်အအုံကို မပိုင်။ အဖွဲ့အစည်းသာ ပိုင်သည်၊ နောက်ဆုံး အစိုးရသာ ပိုင်သည်။
ရဟန်းတစ်ပါးအနေနှင့် အကောင်းဆုံး လုပ်နိုင်သော အချက်မှာ ဤကျောင်းကို ပိုင်သော အဖွဲ့အစည်းကို ကိုယ်က ပိုင်နေအောင် လုပ်ထားဖို့ပဲ ရှိသည်။ ထို့ထက် မပို။
ဤသည်မှာ စင်္ကာပူ၏ ဥပဒေဖြစ်ပြီး ထိုဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာ ရှိနေသော ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ကို စည်းရုံးရေးမှလွဲ၍ မြန်မာပြည်လို ကျောင်းပိုင်၊ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဟူ၍ကား ရှိမည် မဟုတ်ပေ။
သူတို့လူမျိုးက စီးပွားရေးကိုသာမက သာသနာရေးကိုလည်း အမြတ်ရနိုင်သရွေ့ ရအောင် လုပ်တတ်သော အကျင့်ရှိသည်။ လူမျိုးမရှိ၊ အသားအရောင်မရှိ၊ သင်္ကန်းရောင်မရှိ။ ကြိုက်သလို ယူဆနိုင်ပါ၏။ သို့သော် လျော့တွက်လျှင်တော့ မှားပေလိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာ စလုံးများ မခေကြ။ တစောက်ကန်းများ မဟုတ်ကြ။
သူတို့မူက အကျိုးအမြတ် ရရှိဖို့အတွက် ဘာမဆို Maximize လုပ်ရေး ဖြစ်၏။
ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးတွင် အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန် အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော် ရှိ ခေါင်းရွက် ဗျက်ထိုး
ဈေးသည်များကို တစ်ဦးလျှင် ကျပ် ၄သောင်းခွဲ နှုန်းဖြင့် ထုတ်ချေးပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဗဟို သမဝါယမ အသင်း
လီမိတက်၏ အကြီးတန်း မန်နေဂျာ ဦးသိန်းဇော်ထွန်းက အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက်နေက ပြောကြားသည်။
ငွေထုတ် ချေးရာတွင် ငွေချေးငှားသူက တစ်နေ့လျှင် ငွေကျပ် ၉ဝဝ ကျပ်ဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို.နယ်တွင်
ရက်ပေါင်း ၆ဝ ငွေသွင်းရကြောင်း နှင့် လူ ၁၀ ဦးထဲမှ လူတစ်ဦးက ငွေချေးငှားပြီး ပြန်မဆပ်ပါက
ကျန်လူ ၉ ဦးက တာဝန်ယူ စိုက်ပေးရသည့် ဝိုင်းကြီးချုပ် စနစ်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းက ချေးငှားမှု ပုံစံကို
“တစ်နေ့ ၉၀၀ ကို နေ့တိုင်း ပေးတော့ ဝန်ပေါ့ ပါတယ်။ ၁၀ ရက်နေ့မှ ပေါင်းပေးမယ်ဆို ပေးဖို့ ပိုခက်တယ် ။
ရပ်ကွက်ထဲ ခုမှ ပြောင်းလာတဲ့ လူတွေဆို မိမိအဖွဲ့ထဲ မထည့်နဲ့ပေါ့” ဟု ၄င်းက ရှင်းပြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင် စာရင်းများ အရ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု ၂၆ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပြီး၊ ကျေးလက်နေ
၇ဝ ရာခိုင်နှုန်း (လူသန်း ၄ဝ ကျော်)သည် ချမ်းသာသည့် လူစာရင်းတွင် မပါဝင်သေးကြောင်း
ဗဟို သမဝါယမ အသင်း လီမိတက်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်မောင်အေးက သုံးသပ် ပြောကြားသည်။
သမဝါယမ ဝန်ကြီးဌာနတွင် သမဝါယမ ဦးစီးဌာန၊ အိမ်တွင်း စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း၊ သမဝါယမ
ပို့ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်း နှင့် ဗဟိုသမဝါယမ အသင်း လီမိတက် တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
ဘာရယ်တော့ဟုတ်ဘူး တစ်လောက ရွာထဲမှာအရှေ့ကနေတဲ့လူတွေရှိရင် ဖတ်ကြည့်ပါဆိုတဲ့
ပိုက်ဆံဝိုင်းစုကြပြီး ဘတ်သွားတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ စက်စပ်နေတာရယ်
အဲ့သည်မှာ ရွာထဲက မြင်ဘူးသလိုလိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံပါနေဒါတွေ့လို့ဘာ
ရွာက ဓာတ်ပုံပြပွဲ ” ဈေးသည်” က မှော်ဆရာ ရဲ့ မော်ဒယ်လေး ထင်ရဲ့။
မှော်ဆရာ ရဲ့ ဆိုက် မဟုတ်ရင် ဝိုင်းပြီး ကန့်ကွက်ကြစို့။
ဘပု က စ တွေ့သူဖြစ်လို့ ရှေ့က ထွက်။ :harr:
အဲဒါ ကိုမှော့် ပုံ .. အစစ် ပဲ . အဲ့ဒီ့ web site က …. နိုင်ငံရေး နဲ့ သတင်း web site က .. ဘယ်လို လုပ် .. အသိတရား မရှိပဲ ခိုးသုံး ရတာပါလိမ့် …. အော်ပေးကြပါဗျို့  ..။
ကိုလုလင် ပြောတာ ကြည့်မိပြီဗျို့ …
သူတို့ ယူသုံးတာက ဟုတ်တယ်ဗျ ..
စည်းမဖောက်ဘဲ ယူသုံးနည်းနဲ့ သုံးထားခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ် …
ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ …
ပုံရဲ့ လင့်ခ် ကိုပဲ ယူသုံးထားခြင်း ဖြစ်လို့ပါပဲ …
ပုံရဲ့ မူရင်းလင့်ခ် …
ကိုသာ ယူသုံးထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ….
ဒီပုံကို ဒေါင်းလုပ်ချ၊ ပြီးမှ သူတို့ဆိုက်မှာ အက်ပလုပ် ပြန်တင် ဆိုတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးနဲ့ မဟုတ်ပါ ….
ပုံကို ဘယ်က ယူသုံးတာပါဆိုတာမျိုးကိုတော့ ထည့်ပေးရပါလိမ့်မယ် …
photo mandalaygazette ဆိုတာမျိုးပေါ့ …
ဦးသိန်းစိန် များ ရရင် မကျေမနပ် ပြောလိုက်ကြမဲ့ သူတွေ။
အခုလဲ အီးယူလဲ ရရော “ယူကေ က အီးယူ မဝင်ရေး ကွန်ဆာဗေးတစ်များ” မှာလဲ မကျေမနပ် နဲ့။
ဒါဟာ နိုင်ငံရေး နဲ့ လဲ မဆိုင်ဘဲ နဲ့ ဘာညာပေါ့။
တကယ်တော့ အီးယူ ခမျာလဲ အတော် အမည်ပျက်လာလို့ အဖတ်ဆယ်နိုင်အောင် လို့ ပေးတာ လို့လဲ ဝေဖန်သူ ရှိရဲ့။
ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ် ကို အဖွဲ့အစည်း အနေ နဲ့ ရတာ တွေက
2012 – European Union (EU)
1963 – League of Red Cross Societies
1947 – American Friends Service Committee
BURMA RELATED NEWS OCTOBER 11, 2012.
AFP – Japan calls for more Myanmar support
AP – Japan vows aid for Myanmar, urges debt resolution
Reuters – Japan to start waiving most of Myanmar’s $6.4 bln debt next year
ABC OTUS News – No.2US Diplomat to Visit Myanmar Next Week
Malay Mail – Police after seven more suspects in woman’s rape
The Wall Street Journal – Bracing for KFC
The Nation – ADB, World Bank to waive Myanmar’s debt, ministers say
The Japan Times – Myanmar yen loans to start in early 2013
Fox News – One of Myanmar’s ’30 Comrades’ independence heroes dies in exile in China
UPI – Rights group wary of Myanmar investments
Bangkok Post – Yingluck, Thein Sein sign pact
NDTV – Graphic images of N. Korean 1983 bombing published
The Irrawaddy – Calls Grow for Education Reform
The Irrawaddy – Alliance Calls for ‘United States’ of Burma
The Irrawaddy – Farmers Persist in Fight to Halt Monywa Copper Mine
Mizzima News – Burmese gov’t troops death rate high: KIA
Mizzima News – Both sides file suits in mine protest
Mizzima News – Thailand approves high-level Dawei working group
DVB News – Armed Shan group holds talks with government
DVB News – Thein Sein and the Nobel Peace Prize
Deputy Secretary of State William Burns will visit Myanmar next week duringafive-country trip to Asia
October 11, 2012, 7:09 AM HKT
By Becky Palmstrom Associated Press
ယူအက်စ်၂၀၁၂ ရွေးကောက်ပွဲရဲ့.. အလုပ်လုပ်ပုံ.. အရှုံးအနိုင်ခန့်မှန်းတွက်ကြပုံကို ဗဟုသုတရစေချင်လို့ဖြစ်ပါကြောင်း..
အောက်ကလင့်ခ်အတိုင်းလိုက်သွားပြီး.. ဆွဲထားတဲ့ infographic laying outပုံကို သေသေချာချာ ကြည့်ကြစေလိုပါကြောင်း…။
Want to know how all of those $3 and $30 donations add up to makeabig difference in this election?
You should look at this infographic laying out the progress we’ve made in this campaign.
What you’ve helped to build is incredible. Thanks to your support, our Democratic candidates are surging and Speaker Boehner’s Tea Party Republicans are sinking. See for yourself.
We have three weeks left to win this thing. Let’s finish strong!
မြန်မာ့လက်ရွေးစဉ်ဘောလုံး အသင်း ဖလားရပြီ
KNU အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ဗဟိုတရားရေးဌာန တာဝန်ခံ ဖဒိုဒေးဗစ်ထောသည် အသက် ၆၅နှစ်အရွယ်တွင် အဆုတ်ရောဂါဖြင့် မင်္ဂလာဒုံ စစ်ဆေးရုံ၌ အောက်တိုဘာလ ၁၄ ရက်နေ့ ည ၁၀ နာရီ ၃၀ မိနစ်ဝန်းကျင်က ကွယ်လွန်
OIC အလိုမရှိ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်သူ သံဃာ့တော်များနှင့် ပြည်သူတို့သည် ဗဟန်း ၊ေ၇ွှတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုဒ်ရှိ ကြေးသွန်း ဘုရားကြီးရှေ့မှ ဆူးလေသို့ စီတန်း လှည့်လည် လာပြီဟု သိရသည်။
တဖြေးဖြေး နဲ့ အဲဒီဘာသာ က အစွန်းရောက် သမား တွေ ရဲ့ အစွန်းရောက် လုပ်ရပ်တွေ ကို ကမ္ဘာက မြင်လာပါပြီ။
ပါကစ္စတန် မှာ “မိန်းကလေးတွေ ကျောင်းနေနိုင်ရေး” ကန်ပိန်းလုပ်တဲ့ ၁၄နှစ် မိန်းကလေးရဲ့ ခေါင်း ကို အဲဒီ အစွန်းရောက်တွေ သေနတ်နဲ့ပစ် ခဲ့ကြတယ်။
အခု ယူကေ က ဆေးရုံ တစ်ခု ကို သယ်ပြီး ကုပေးဖို့ ကြိုးစားနေပါပြီ။
ဘဝတူ မိန်းကလေးများ အတွက် ကြိုးပမ်း ပေးတဲ့ ဒီလို မိန်းကလေး အသက် ကို ကယ်နိုင်ကြပါစေ။
ပြီးတော့ အကျိုးရှိတဲ့ အလုပ်တွေ ပိုမိုပြီး လုပ်နိုင်ပါစေ။
ငါသာဆို၊ ငါ့သမီး သာဆို ပြီး အတော်လေး အီမိုရှင်း ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ကျောင်းနေချင်တဲ့ အကြောင်းဟာ ဘယ်သူ့ကို ထိခိုက် စေလို့လဲ။
မိန်မ တွေ အသိပညာ ရ လာရင် အိမ်ထဲမှာ ခေါင်းမြီးခြုံ မနေတော့ မှာ စိုးလို့လား။
မိန်းမ တွေ ကို ကျွန်လိုဘဲ အိမ်မှာ ခေါင်းမြီးခြုံထား စေတဲ့ ဝါဒ မကြာခင် ကျဆုံးပါစေ။
The girl wroteadiary for the BBC about life under the Taliban, who accused her of “promoting secularism”.
The UK said Malala’s transfer followed London’s offer to help her in any way.
The Queen Elizabeth Hospital in Birmingham – an NHS (National Health Service) hospital which hasaspecialist major trauma centre – confirmed that she would be treated there.
It was not immediately clear whether any of Malala’s family were with her.
The Pakistani military said doctors in Rawalpindi has described Malala’s condition as “optimal”.
The UK’s Foreign Secretary William Hague said the attack on Malala and her friends “shocked Pakistan and the world” and that her bravery was “an example to us all”.
“The public revulsion and condemnation of this cowardly attack shows that the people of Pakistan will not be beaten by terrorist,” he said. “The UK stands shoulder to shoulder with Pakistan in its fight against terrorism.”
She had previously received death threats from the Taliban and was attacked last Tuesday as she returned home from school in Mingora, north-western Swat.
The BBC’s Aleem Maqbool in Islamabad says Malala has been kept sedated and onaventilator since she was taken to hospital, with tight security around her.
He adds that the brutal attack onachild has shocked people in Pakistan and around the world. Protests have been held in several Pakistani cities to condemn the Taliban’s actions.
On Sunday, tens of thousands of people turned out in the city of Karachi to show their support.
On Monday, former British Prime Minister Gordon Brown – now the UN’s Special Envoy for Global Education – said he was launchingapetition in Malala’s name “in support of what Malala fought for”.
“The petition calls on Pakistan to ensure that every girl like Malala has the chance to go to school,” he said, while also calling on the international community to ensure all children have access to education by the end of 2015.
Mr Brown said he would hand the petition to Pakistan’s President Asif Ali Zardari when he visits Islamabad in November.
I felt hurt on opening my wardrobe and seeing my uniform, school bag and geometry box. Boys’ schools are opening tomorrow. But the Taliban have banned girls’ education. ”
နိုင်ငံရေးစကားဆိုတော့ အစ္စလာမ်လို့ ဘယ်ပြောနေပါ့မလဲ။ ရလေးဂျင်းလို့ပဲ အားလုံးကိုခြုံပြီး ပြောမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့်တင်းကြပ်လာမယ့် ဥပဒေတွေဟာ တခြားဘာသာတွေနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။ “အဲယားကွန်းခန်းထဲ ဆေးလိပ်မသောက်ရ” ဆိုသလိုပဲ ကျန်တဲ့သူတွေက သောက်မှ မသောက်တာ၊ ဘာထူးပြီး လိုက်နာနေစရာ လိုမှာလဲ။ သောက်တဲ့လူတွေကို သွားထိမှာပေါ့။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက နိုင်ငံရေးစကား၊ နိုင်ငံရေး ဦးနှောက်တွေနဲ့ အကြမ်းဖက်ရေနံငွေတွေကို စနစ်တကျ ထိန်းသိမ်းနေရတဲ့အထဲ – OIC ရဲ့ လူသားချင်းငဲ့ညှာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့ အကူအညီကို လက်ခံသတဲ့။ အာရပ်သဌေးတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်တွေကို ဒီလောက်စေတနာရှိပါ့မလား ၀န်ကြီးရယ်။
ဒီမိုကရေစီစနစ်အတည်တကျဖြစ်သွားပြီး ၀န်ကြီးတွေကလည်း ပညာတတ်တွေဖြစ်ကုန်ရင် ဒီလို “လူသားအချင်းချင်း စာနာ” ဆိုတာမျိုးတွေယုံကြည်ကြမှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ၀င်လို့ရမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ။
ဒါဆိုရင်တော့ ဒီအစိုးရရဲ့ စီးပွားရေး အမြင်ကလည်း “ချာ” သွားပြန်ရော။
ဒီတော့ NGO တွေ ၊ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့တွေက “ဒါမျိုးလုပ်ရပ်ကို ရှုံ့ချပါတယ် ” တဲ့။ ဒါပဲ။ ဒီထက်မပိုဘူး။
နိုင်ငံခြားသား ခံယူထားသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့် (Permanent Residence – PR) ရရှိနိုင်မည့် စနစ်ကို လာမည့် ၃ လအတွင်း အကောင်အထည်
ဖော်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောသည်။
အမေရိကန် သမ္မတကြီး ဂျော့ ဝါရှင်တန် ပြောဘူးတဲ့ စကားတခုရှိပါတယ်( ကျုပ်တို့ခေတ်မှာ စစ်ပညာကို စနစ်နကျ တတ်မြောက်ထားမှ ကျုပ်တို့ သားသမီးတွေခေတ်မှာ ရှုပဗေဒဘာသာရပ်နဲ့ သချာင်္ပညာတွေကို အေးအေးဆေးဆေး သင်ကြားနိူင်မှာ ဖြစ်တယ်)ဆိုတဲ့ စကားပါ။
—လက်ရှိတပ်မတော်အတွင်း ကျင့်သုံးနေတဲ့ အမိန့်နာခံရေးဗဟိုပြု အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အောက်မှာ လူငယ်တွေရဲ့ လွတ်လပ်မှု နဲ့ ရွေးချယ်ခွင့်တွေ ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ထင်မိတယ်။
သူ့စိတ်နဲ့ကိုယ့်ကိုယ် နေသားကျလာတဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ တွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချမှတ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါ့ မလား။
လူငယ်တွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေးတတ်မြင်တတ် ဖောက်ထွက် ဆွေးနွေး လုပ်ကိုင်တတ်သူ တွေ ဖြစ်လာစေချင်တာပါ။
စကားလုံးတွေနဲ့ ၀န်ပိမနေစေချင်ဘဲ လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ခြေမှာ ရှင်သန်နေစေချင်တာပါ။
ကျနော့သိမြင်မိသလောက် ပြောရရင်တော့ ဒီခေတ်မှာ မျိုးချစ်စိတ်ရှိရမယ်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီး အများအကျိုးသယ်ပိုးရမယ် စသဖြင့် ယေဘူယျဆန်ဆန် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မရှိတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ လူငယ်တွေရဲ့ စိတ်ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ချည် နှောင် မထားသင့်တော့ဘူးလို့ ထင်မိတယ်။
တကယ်လက်တွေ့မှာလည်း အဲဒီစကားတွေဟာ လူငယ်တွေအတွက် အားမ ဖြစ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အကာအကွယ်ယူတဲ့ ခြုံလွှာ တွေလိုဖြစ်နေတတ်တယ်။
လူငယ်တွေရဲ့ပင်ကိုယ်စရိုက်မှာကိုက ပရဟိတ စိတ်တွေ ကိန်းအောင်းနေပြီးသားပါ။
အရေးကြီးတာက အတွေးအခေါ်လွတ်လပ်မှုရှိဖို့ကိုပဲ လမ်းဖွင့်ပေးရမှာ။
တိုင်းပြည် မှာ အရေးကြုံတဲ့အခါ စိတ်လွတ်လပ်မှု ရှိသူတွေကသာ ပြဿနာကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းတတ်တာမဟုတ်လား။
————ကျနော့်တို့ တိုင်းပြည်မှာတော့ လူငယ်တွေ ကိုယုံကြည်ဖို့ လိုတယ်
“လူ့အခွင့်အရေးကို လေးစားတာ၊ အရပ်သားက စစ်တပ်ကို ကြီးကြပ်တာနဲ့ လုပ်ငန်းပွင့်လင်းမြင်သာမှု ဆိုတာတွေက စနစ်ကျတဲ့ ခေတ်မှီတပ်မတော်တွေရဲ့ အရည်အသွေးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရာတွေဟာ တရားဝင်မှုအတွက် အရေးပါတဲ့ အရာတွေပါပဲ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ ဒီကိစ္စတွေမှာ သိပ်ကို အလေးအနက်ထားပါတယ်” လို့ အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာနရဲ့ အာရှနဲ့ ပစိဖိတ်လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်များဆိုင်ရာ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဗိုလ်မှူး ကေသီ ဝေလ်ကင်ဆင် Major Catherine Wilkinson က ပြောပါတယ်။
ဟိဟိ သူကြီးမင်းကတော့သဘောတူမှာမဟုတ် :D
နိုင်ငံကြီးသားများ အတွက် ပြည်သူ့ နီတိ
မြန်မာနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နိုင်ငံ အားလုံးနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် အကျယ်အဝန်း အရ သော်လည်းကောင်း၊ လူဦးရေ အရ သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံငယ်ကလေး တစ်ခု မဟုတ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံထက် အရွယ်အစား အားဖြင့် ကြီးသော နိုင်ငံများမှာ ၃၉ နိုင်ငံသာ ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ထက် သေးသော နိုင်ငံမှာ ၂ဝ၉ နိုင
်ငံ ရှိကြောင်းနှင့် လူဦးရေအားဖြင့် ဆိုလျှင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံထက် များသော နိုင်ငံမှာ ၂၅ နိုင်ငံသာ ရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံထက် လူဦးရေ နည်းသောနိုင်ငံ စုစုပေါင်း ၂၁၆ နိုင်ငံ ရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အနေနှင့် မိမိတို့ ကိုယ်ကို မိမိနိုင်ငံငယ်ကလေး တစ်ခုက နိုင်ငံသားများ အဖြစ် မမှတ်ယူ စေလို ဘဲ နိုင်ငံကြီးသားများ အဖြစ် မှတ်ယူကာ နိုင်ငံကြီးသားများ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါနှင့် ထိုက်တန်သူများ အဖြစ် မိမိတို့ဘာသာ တည်ဆောက်မြှင့်တင် ထားသင့်ကြောင်း အွန်လိုင်း ဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
မှန်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် သမိုင်းကြောင်းအရ သော်လည်းကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ သော် လည်းကောင်း နိုင်ငံတကာ တွင် အောက် တန်း နောက်တန်း က ရှိခဲ့သော နိုင်ငံတစ်ခု မဟုတ်ခဲ့ပေ။ နိုင်ငံသားများ၏ အရည်အချင်း ညံ့ဖျင်းသောကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ၁၉၆၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ကျင့်သုံး အုပ်ချုပ်ခဲ့သော စနစ်ဆိုးကြောင့် အများ အထင်သေးခံ ရသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိ သွားခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မျက်မှောက် မြင်တွေ့နေရသည့် စည်းကမ်းမဲ့မှုများ၊ အပြစ်တင်စိတ်ကဲသော ရှုမြင် သုံးသပ်မှုများ၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သက်သက် ချိုးနှိမ် တိုက်ခိုက်မှုများ၊ ကိုယ်ကျိုးသက်သက် ကြည့်ကာ အများအကျိုး လျစ်လျူရှုမှုများ၊ အချောင်စီးပွားဖြစ် လိုသူများ၊ အပြောင်းအလဲ ကို မသိသူများ၊ အပြောင်းအလဲကို အခုအခံ ကြီးကြီးဖြင့် ကာဆီး လိုသူများ၊ အာဏာ ဖက်တွယ်လိုသူများ စသည့် နိုင်ငံကြီးသားများ၏ ဂုဏ်အင်္ဂါနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေမှု များသည် နှစ် ၅၀ ကာလ ကျင့်သုံးခဲ့သော စနစ်ဆိုး၏ အလွဲသြဇာ သက်ရောက်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်ခဲ့သည့် နှစ်ငါးဆယ် မတိုင်ခင်ကမူ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဒေသတွင်းတွင်ရော ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပါ အများက လေးစား ခံ့ညားရသည့် နိုင်ငံကြီး တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်စေရန်လည်း လွတ်လပ်ရေး ရပြီး အချုပ်အခြာ ပိုင်နိုင်ငံ အဖြစ် ရပ်တည်ချိန်မှ စကာ နိုင်ငံသားတို့၏ အသိပညာ ရေချိန်ကို ထိုခေတ် ပညာရေး စနစ်က မြှင့်တင် ပေးခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံသားတို့၏ အသိပညာ ရေချိန်နှင့် နိုင်ငံကြီးသားများ အဖြစ် လေ့ကျင့် မြှင့်တင် ပေးရေး အတွက် အဓိက အရေးကြီးသည်မှာ Civic Education ခေါ် ပြည်သူ့ နီတိ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခေတ်က ပညာရေး စနစ်အရ အခြေခံပညာ မူလတန်းမှ စကာ အလယ်တန်း၊ အထက်တန်း၊ ကောလိပ်၊ တက္ကသိုလ် အဆင့်အထိ သူ့အဆင့်နှင့်သူ လိုက်လျောညီထွေ ရှိမည့် ပြည်သူ့နီတိကို သင်ကြားပေးပါသည်။ ထိုပညာရေး စနစ်ကြောင့်ပင်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံ သား များ နိုင်ငံတကာ အလယ်တွင် ဂုဏ်သိက္ခာ ရှိရှိ အဆင့်တန်း မြင့်မြင့် ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ယနေ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ပြောင်း ကာလမျိုးတွင် နိုင်ငံတော်၏ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုအပြင် စိတ်ပိုင်း ပါ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် အလို့ငှာ အာဏာသုံးရပ် အပါအဝင်၊ စတုတ္ထ မဏ္ဍိုင်နှင့် ပဉ္စမမဏ္ဍိုင်တို့တွင် ရှိနေသူ အားလုံး ပြည်သူ့နီတိကို လေ့လာ သင်ယူကြရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ယနေ့လွှတ်တော်အတွင်း ရောက် ရှိနေကြသော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရ အဖွဲ့အတွင်း သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ် အလိုက် ဝန်ကြီး အဖြစ် တာဝန် ယူထားသူများ၊ တရားရေး မဏ္ဍိုင်မှ တာဝန်ရှိသူများ ပြည်သူ့နီတိကို အခြေခံမှ စကာ ယခုပင် လေ့လာသင်ယူ သင့်လှပါသည်။ သို့မှသာ ပြည်သူ့နီတိသည် နိုင်ငံ တည်ဆောက်ရေး၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်မှုတို့တွင် မည်ရွေ့မည်မျှ အရေးကြီးကြောင်း ကောင်းစွာ သဘောပေါက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိ နိုင်ငံ့တာဝန်ကို ထမ်းဆောင် နေကြသူ အဓိက ခေါင်းဆောင်များ၊ Stakeholder များ အနေနှင့် နောင်ဆယ်နှစ် အနှစ်နှစ်ဆယ်မှသည် အနှစ်ငါးဆယ် တစ်ရာ တိုင်သည် အထိ မျိုးဆက်သစ် များစွာတို့ ဆင့်ပွား အမွေ ခံကြရမည့် ဒီမိုကရေစီ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး တစ်ခု အဖြစ် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ခေါင်းမော့ ရင်ကော့နိုင်သည် အထိ
မျှော်တွေး စဉ်းစား ကြပါမည့်အကြောင်း အထူး တိုက်တွန်း အပ်ပါသည်။
(The Voice Editorial – 18.10.2012)
နောက်ကြောင်းမပြန်ဖို့က ပြည့်သူ့ဆန္ဒအတိုင်းပါတဲ့ .ဒို့ ဘကြီးစိန် (ခွက်ဒစ်တူ ..ကိုဂီ) က ဆိုသတဲ့..
ပြည်တွင်းမီဒီယာများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတအား Eleven Media Group မှ မေးမြန်းခဲ့သည့် မေးခွန်းနှင့် ပြန်လည်ဖြေကြားချက်
– မေး –
ယနေ့ (၂၁-၁၀-၂၀၁၂)တွင် ကျင်းပသော နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ပြည်တွင်းမီဒီယာများ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံပွဲတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အား Eleven Media Group မှ မေးမြန်းခဲ့သည့် မေးခွန်းနှင့် သမ္မတမှ ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့သည်များကို ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး အနေနဲ့သော်လည်းကောင်း၊ လက်ရှိအာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌအပြင် လက်ရှိတပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေက လေးစားတယ်လို့သိရတဲ့ ယခင်တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီမေးခွန်းကို မေးမြန်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ တိုင်းရင်းသား ပြန်လည်စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာ ခရီးအတော်ရောက်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာပဲ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးရော တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကပါ ဘယ်တော့မှ နောက်ပြန်မသွားဘူးလို့ ပြောကြားထားတာ နိုင်ငံတကာက အသိဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေး သည်းသည်းမဲမဲ တိုက်ခိုက်ရေးသားတာတွေကို Myanmnar Express ၀က်ဘ်ဆိုက်မှာ တွေ့ရသလို တပ်မတော်အရာကြီး တစ်ချို့ကြားထဲမှာ ကုလားမဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး သုံးနှုန်းနေတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ နောက်ပြန်သွားနိုင်မလားဆိုတဲ့ သံသယတွေ ရှိနေပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေကြားထဲ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံသူတွေကြားထဲမှာ ပြန်လည်လက်စားချေလိုတဲ့ သဘောအသုံးအနှုန်းမျိုးနဲ့ လုပ်ဆောင်တဲ့ အနေအထားတွေ တွေ့နေရပါတယ်။ ဒီအခြေအနေမှာ ပြည်သူတွေကြားထဲနဲ့ နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကြားထဲမှာ နောက်ပြန်သွားနိုင်မလားဆိုတဲ့ သံသယတွေရှိနေပါတယ်။ မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂါလီကိစ္စမှာ ဆိုရင်လည်း ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကြောင့် အစပြုဖြစ်ခဲ့ရတဲ့သဘောမျိုး အစီရင်ခံစာထွက်ရှိလာသလို ကချင်ပြည်နယ်ကိစ္စကလည်း ရှိနေဆဲပါ။ ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ယူဆတာက ဒီလိုနောက်ပြန်မလှည့်နိုင်ဖို့၊ သံသယတွေမရှိဖို့ဆိုရင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်နိုင်ဖို့က အဓိကကျမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေနဲ့ ပတ်သက်လို့ လက်ရှိမှာလုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အနေအထားတွေရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၊ လွှတ်တော်ထဲမှာ မဲအများဆုံးရရှိပြီး ရောက်ရှိနေတဲ့ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာ ဖက်ဒရယ်၊ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအနေအထားမှာ ရှိနေတဲ့အတွက် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီမှာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသလား၊ ဒါမှမဟုတ်၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကျော်လွန်ပြီးမှ အခြားပါတီနိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ့် အခြေအနေမျိုးမှာမှ ပြုပြင်ဖို့ အစီအစဉ်ရှိပါသလားဆိုတာ သိချင်ပါတယ်။
– ဖြေ –
နောက်ပြန်လှည့်မလား၊ မလှည့်ဘူးလားဆိုတာကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ ပြည်သူကို မေးကြည့်ရင်တော့ ဘယ်လိုမှ နောက်ပြန်လှည့်ချင်တဲ့ ဆန္ဒမရှိတော့ပါဘူး။ ပြည်သူက နောက်ပြန်မလှည့်ချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ကလည်း နောက်ပြန်မလှည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားပြီးလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးမှာတော့ သဘောထားတွေကတော့ အမျိုးမျိုးရှိမှာပါ။ တူညီတဲ့ အချက်တွေရှိတယ်။ မတူညီတဲ့ အချက်တွေရှိတယ်။ နိုင်ငံရေးသမား ဆိုတာကတော့ ချီးမွမ်းခံရတာတွေရှိသလို၊ အဆဲခံရတာတွေလည်း ရှိမှာပါပဲ။ ရှေ့ကိုပဲ ချီတက်သွားဖို့လိုတယ်လို့ ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ရေးမပြင်ရေးကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေမှာလည်း ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီမှာအခန်း ၁၂ ဆိုလို့ရှိရင် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို ပြင်နိုင်တဲ့ Amendement ပေါ့။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ဘာတွေညာတွေလည်း ပါတာပေါ့။ ကျွန်တော့်သဘောထား တစ်ရပ်ထဲနဲ့တော့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်လိုက် ဒီလိုမျိုးပြောလို့တော့မရဘူး။ မပြင်ပါနဲ့လို့ သွားပြောလို့ကလည်းမရဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ရေးမပြင်ရေးသည် ပြည်သူတွေက ရွေးချယ်တင်မြောက်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ဆန္ဒအပေါ်မှာပဲ မူတည်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကလည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဘယ်လောက်ကနေပြီးတော့ ပြင်ဖို့ ဟိုဒင်းလုပ်ရင် ဘယ်လိုတွေ ဆက်လုပ်ရမယ် ဘာညာပါပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့ ပြင်ဆင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ကျွန်တော်တို့ပေးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်ရေးမပြင်ရေးသည် ခုနကပြောတဲ့ ပြည်သူတွေက ရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ သဘောထားအတိုင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ ပြန်ဖြေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
“တကယ်ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့သူတိုင်းမှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်မတွေကို ပြင်ဆင်ဖို့က ကိုယ့်တာဝန်ပဲလို့ မှတ်ယူရပါမယ်။ နောက်ပြီးတော့ နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ညီလာခံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ မဟုတ်ဘူးလား” ဟု ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပေါ်တွင်သာ မူတည်ကြောင်း သမ္မတကြီး၏ ပြောကြားချက်နှင့်ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြင်ဆင်ရေးအတွက် NLD ပါတီအနေဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင် အဆိုတင် သွင်းမည်နည်းဟု Eleven Media Group ၏ မေးမြန်းမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်မှာဘယ်လောက်အထိ အောင်မြင်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်ပြီးလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ကစမလဲဆိုတာလည်း ဆုံးဖြတ်ရမယ်” ဟု ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
ထို့အတူ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေတွင်ပါဝင်သော သမ္မတလောင်း အရည်အချင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က “အဲဒီ ဥပဒေကို အမေတို့သဘောမတူဘူး။ အဲဒါကြောင့် တကယ်ပဲမျှမျှတတနဲ့ ပြိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီဥပဒေကို မျှတအောင်လုပ်ရမယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“နောက်သက်တမ်းမှာ အရွေးချယ်ခံချင်တဲ့ မည်သူမဆို အားလုံးကနေ မျှမျှတတ အခြေခံပေါ်ကနေ ရွေးချယ်နိုင်အောင်လို့ ကြိုးစားပေးစေချင်တယ်။ အကုန်ပြင်ရမှာပဲ။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကြီးက တရားမျှတမှုမှ မရှိတာ။ တရားမမျှတတဲ့ ဥပဒေအရတော့ ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်စိတ် မရှိသင့်ဘူးလို့ ဒီလိုပဲမြင် တယ်” ဟု သတင်းထောက်များ၏ မေးမြန်းချက်များကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါသည်။
BURMA RELATED NEWS OCTOBER 19-23, 2012.
AP – Myanmar: New clashes between Muslims, Buddhists
AP – In Myanmar, only sickest HIV patients get drugs
AP – Land battles surface in Myanmar as reforms unfold
AP – Myanmar leader holds milestone 1st press briefing
AP – Myanmar army may get invite to US-Thai exercise
Reuters – U.S. says Myanmar “on right track” over North Korea arms ties
AFP – Myanmar leader says no longer afraid of media
AFP – Myanmar president sees new investment law ‘in days’
AFP – Myanmar minorities fight to save mother tongue
AFP – Couple’s love bridges Myanmar religious divide
AFP – Myanmar leader says open to aid for Muslims
Asia News Network – Myanmaragame-changer in US relations in Asia?
Indian Express – Myanmar migrant sent out messages that sparked Azad Maidan riot: Police
Business Wire – Research and Markets: Myanmar – An Emerging Mineral Producer
IANS – Myanmar, India entrepreneurs to meet
IANS – Myanmar airlines to launch flights to Bihar
FIFA – Myanmar, the former rulers in revival mode
IRIN – MYANMAR: Demining movesastep closer
The Irrawaddy – Permanent Residency Not for All Foreigners: Minister
The Irrawaddy – 500 NLD Members to Quit in Pathein
The Irrawaddy – Violence Reignites in Arakan State
Mizzima News – Germany to help build new Rangoon airport
Mizzima News – Japanese foundation gives direct aid to UNFC group
Mizzima News – Land confiscation issue major concern for Burma’s rights groups
DVB News – Several labourers injured after Thai, Burmese nationals clash
DVB News – Police officers taken into custody following interview